Inona no atao hoe fanompoana | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny fiankohofana dia ny valim-bavaka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra no vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'ny fanambarany ny tenany ho amin'ny zavatra noforoniny. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana, ny mpino dia miditra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra Ray amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy, alalàn'ny Fanahy Masina. Ny fiankohofana dia midika koa hoe laharam-pahamehana sy amim-pifaliana ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Miseho amin'ny toetra sy fihetsika toy ny: vavaka, fiderana, fankalazana, fahalalahan-tanana, famindrampo mavitrika, fibebahana (Jaona 4,23; 1 Jaona 4,19; Filipiana 2,5-11; 1 Petera 2,9-10; Efesiana 5,18-20; Kolosiana 3,16-17; Romana 5,8-11; 12,1; Hebreo 12,28; 13,15-16).
Mendrika hajaina sy hoderaina Andriamanitra
Ny teny anglisy hoe "fanompoam-pivavahana" dia manondro fa ny iray dia manisy vidiny sy manaja ny olona iray. Betsaka ny teny hebreo sy grika izay adika amin'ny fanompoam-pivavahana, fa ny lehibe indrindra dia ahitana ny hevitra fototra momba ny fanompoana sy ny adidy, toy ny asan'ny mpanompo mampiseho ny tompony. Izy ireo dia maneho ny hevitra fa Andriamanitra irery no Tompon'ny faritra rehetra amin'ny fiainantsika, araka ny nasehon'ny valintenin'i Kristy an'i Satana ao amin'ny Matio 4,10: «Halaviro ry Satana! Fa voasoratra hoe: Iaveh Andriamanitrao no hiankohofanao, ary hotompoinao irery izy » (Matio 4,10; Lioka 4,8; Deot 5).
Ny foto-kevitra hafa dia misy ny sorona, tsipìka, fiaikarana, fankamasinana, fanoloran-tena, sns "Ny fototry ny fiankohofana amin'Andriamanitra dia ny - amin'ny fanomezana an'Andriamanitra izay tokony ho azy" (Barackman 1981: 417).
Nilaza i Kristy fa "tonga ny fotoana hivavahan'ny tena mpivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana; satria ny ray koa te-hanana izany mpivavaka izany. Fanahy Andriamanitra, ary ireo mpivavaka aminy dia tokony hivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana » (Jaona 4,23-24).
Ilay andalana etsy ambony dia milaza fa ny fiankohofana dia miantefa any amin'ny Ray ary izany dia ampahany tsy misy dikany amin'ny fiainan'ny mpino. Tahaka ny fanahy Andriamanitra, dia tsy ho ara-batana fotsiny ny fiankohofantsika, fa hameno ny maha-olombelona antsika ary hiorina amin'ny fahamarinana ihany koa (Mariho fa i Jesosy, ny Teny, no fahamarinana - jereo ny Jaona 1,1.14; 14,6; 17,17).
Ny fiainam-pinoana manontolo dia ny fiankohofana ho valin'ny ataon'Andriamanitra amin'ny "tia ny Tompo Andriamanitsika amin'ny fontsika rehetra, ny fanahintsika rehetra sy ny saintsika rehetra" (Marka 12,30). Ny fivavahana marina dia maneho ny halalin'ny tenin'i Maria manao hoe: "Ny fanahiko manandratra ny Tompo" (Lioka 1,46).
«Ny fiankohofana dia ny fiainam-piangonana manontolo izay itondran'ny vondron'olona mino, amin'ny herin'ny Fanahy Masina, amena an'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. (aoka izany!) hoy » (Jinkins 2001: 229).
Izay ataon'ny kristiana dia fotoam-pivavahana feno fankasitrahana. "Ary izay rehetra ataonao amin'ny teny na amin'ny asa, dia manao ny zava-drehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary misaora an'Andriamanitra Ray amin'ny alalany" (Kolosiana 3,17:1; jereo ihany koa ny 10,31 Korintiana).
Jesosy Kristy ary miankohoka
Ny fizarana etsy ambony dia milaza fa manao fisaorana isika amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Koa satria Jesosy, ny Tompo, izay "Fanahy" (2 Korintiana 3,17), izay mpanelanelana sy mpiaro antsika, ny fivavahantsika dia mandalo ao amin'ny Ray.
Ny fanompoam-pivavahana dia tsy mitaky ny mpanelanelana olombelona, ​​toy ny pretra, satria ny fampihavanana dia nihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny fahafatesan'i Kristy ary tamin'ny alalany dia "niditra tamin'ny Ray tamin'ny fanahy iray" (Efesiana 2,14: 18). Ity fampianarana ity dia ny lahatsoratra tany am-boalohany izay fahitan'i Martin Luther ny "pretra mpino". «... dia manompo an'Andriamanitra hatrany ny fiangonana raha mbola amin'ny fanompoam-pivavahana tonga lafatra (leiturgia) izay natolotr'i Kristy ho antsika.
Nivavaka tamin'ny fisehoan-javatra lehibe teo amin'ny fiainany i Jesosy Kristy. Ny hetsika iray dia ny fankalazana ny nahaterahany (Matio 2,11) rehefa nifaly ny anjely sy ny mpiandry (Lioka 2,13: 14-20,), ary amin'ny fitsanganany amin'ny maty (Matio 28,9, 17; Lioka 24,52). Na dia tamin'ny asa fanompoana teto an-tany aza dia nivavaka taminy ny olona ho valin'ny asany tamin'izy ireo (Matio 8,2; 9,18; 14,33; Marka 5,6, sns). Ny Apokalypsy 5,20 dia manambara momba an'i Kristy: "mendrika ny Zanak'ondry voavono."
Ny fiankohofana miaraka amin'ny Testamenta Taloha
«Ny zaza hidera ny asanao ary hanambara ny ataonao mahery. Hanambara ny fahalehibiazanao sy ny asanao mahagaga izy ireo; hilaza ny asanao mahery izy ireo ary hanambara ny voninahitrao; tokony hidera ny hatsaranao lehibe izy ireo ary hidera ny fahamarinanao » (Salamo 145,4: 7).
Ny fampiharana ny fiderana sy ny fiankohofana miaraka dia miorina mafy amin'ny fomban-Baiboly.
Na dia misy aza ny ohatra momba ny fahafoizan-tena sy ny fitsaohana, ary koa ny asan'ny kolontsainan'ny mpanompo sampy, dia tsy nisy fombafomba mazava momba ny fiankohonana ny tena Andriamanitra alohan'ny niorenan'ny Isiraely ho firenena. Ny fangatahan'i Mosesy tamin'i Farao ny hamelany ny Isiraelita hankalaza ny fanasan'ny Tompo dia iray amin'ireo fampisehoana voalohany momba ny fiantsoana ny fiaraha-mivavaka iombonana (Genesisy 2:5,1).
Nankany amin'ny Tany Nampanantenaina i Mosesy, ary nilaza ny fety sasany izay tokony hankalazan'ny Isiraelita azy. Ireo dia voalaza ao amin'ny Eksodosy 2, Levitikosy 23 ary any an-kafa. Raha jerena ny dikany, dia mitodika ny fahatsiarovana ny fifindra-monina avy any Ejipta sy ny traikefany tany an-tany efitra. Ohatra, ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsankazo mba hahafantaran'ny taranak ny zanak'Israely "ny fomba nanaovan'Andriamanitra ny zanak'israely honina tao amin'ny trano bongo" rehefa nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta izy. (Genesisy 3:23,43).
Ny fahitana ireo fivoriambe masina ireo dia tsy tetiandro litorzika mihidy ho an'ny Isiraelita dia miharihary amin'ny zava-misy ao amin'ny Soratra Masina fa ny fety fanao isan-taona fanavotana ho an'ny firenena dia nampidirina taty aoriana teo amin'ny tantaran'ny Isiraely. Ny iray dia ny Fetibary Purim, fotoana iray "fifaliana sy firavoravoana, fanasambe sy andro firavoravoana" (Estera [habaka]] 8,17; Jaona 5,1 dia mety koa manondro ny Fetin'ny Purim). Ny iray hafa dia ny fankalazana ny fanokanana ny tempoly. Naharitra valo andro izy ary nanomboka tamin'ny Kisle faha-25, araka ny kalandrie hebreo (Desambra), ary ny fampisehoana fahazavana dia nankalaza ny fanadiovana ny tempoly sy ny fandresena an'i Antiokia Epiphanes nataon'i Jodasy Maccabeus tamin'ny 164 talohan'i Kristy. Jesosy tenany, "fahazavan'izao tontolo izao", dia tao an-tempoly tamin'izany andro izany (Jaona 1,9; 9,5; 10,22-23).
Nampahafantarina amin'ny fotoana voatondro ihany koa ny andro fifadian-kanina isan-karazany (Zakaria 8,19), ary nohenoina ny volana vaovao (Esra [habaka]] 3,5, sns). Nisy ôrdônansy israeliana isan-kerinandro sy fanao isan-kerinandro ary fanao sorona. Ny Sabata isan-kerinandro dia nodidiana "fivoriana masina" (Levitikosy 3: 23,3) sy ny famantarana ny fifanekena taloha (Eksodosy 2: 31,12-18) eo anelanelan'Andriamanitra sy ny Isiraelita, ary fanomezana koa avy amin'Andriamanitra ho an'ny fitsaharana sy fampiasana azy ireo (Nomery 2: 16,29-30). Miaraka amin'ireo andro masina Levita, ny Sabata dia raisina ho ampahany amin'ny fifanekena taloha (Nomery 2: 34,10-28).
Ny tempoly dia antony iray lehibe hafa amin'ny fampiroborobo ny lalam-pivavahan'ny Testamenta Taloha. Miaraka amin'ny tempoliny, i Jerosalema dia lasa toerana ivon-toerana izay nandehanan'ireo mpino mba hankalaza ny fialantsasatra isan-karazany. «Te-hieritreritra an'izany aho ary hamboraka ny ao am-poko ao hoe: ahoana ny fomba nifindranako maro be mba hiara-hitondra azy ireo ho any an-tranon'Andriamanitra miaraka am-pifaliana.
ary misaotra amin'ny vahoaka marobe amin'ny fankalazana » (Sal. 42,4; jereo koa ny 1Cr 23,27-32; 2Chr 8,12-13; Jaona 12,12; Asa 2,5-11, sns).
Ny fandraisana anjara tanteraka amin'ny fotoam-pivavahana dia noferana tao amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha. Tao anatin'ny distrikan'ny tempoly dia mazàna ny zaza amam-behivavy no tsy mahazo miditra amin'ny toerana ivavahana. Ny fiterahana volamena sy ny tsy ara-dalàna ary ny vondrom-poko isan-karazany toa ny Moabita dia tokony “tsy” hiditra ao anatin'ny fiangonana mihitsy (Deoteronomia 5: 23,1-8). Mahaliana ny mamakafaka ny foto-kevitra hebreo hoe "never". I Jesosy kosa dia avy tamin'ny vehivavy moabita iray atao hoe Rota (Lioka 3,32; Matio 1,5).
Fotoam-pivavahana miaraka amin'ny Testamenta Vaovao
Misy tsy fitoviana mazava eo amin'ny Testamenta taloha sy Vaovao momba ny fahamasinana mifandray amin'ny fanompoana. Araka ny efa voalaza teo aloha, ny toerana sy fotoana ary olona sasany dia raisina ho masina ary noho izany dia ilaina kokoa amin'ny fivavahan-dresaka noho ny hafa.
Miaraka amin'ny Testamenta Vaovao, miainga isika avy amin'ny Testamenta Taloha amin'ny maha-anisan'izany ny Testamenta Vaovao avy amin'ny fomba fijerena ny fahamasinana sy ny fanompoana; avy amin'ny toerana sy olona sasany amin'ny toerana rehetra, fotoana ary olona.
Toerana masina "toerana hanaovana fanompoam-pivavahana" ny tabernakely sy ny tempoly any Jerosalema. (Jaona 4,20), kanefa i Paul dia nandidy fa ny lehilahy dia tsy tokony hanangan-tanana masina, tsy ao amin'ny toerana tranainy ao amin'ny Testamenta Taloha na ireo toerana ivavahan'ny Jiosy, fa "amin'ny toerana rehetra", fomba fanao mifandray amin'ny fitoerana masin'ny tempoly. (1 Timoty 2,8: 134,2; Salamo).
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fiaraha-mientana amin'ny fiaraha-monina dia atao an-trano, amin'ny efitra avo, any amoron'ny renirano, amoron'ny farihy, amin'ireo havoana tendrombohitra, any am-pianarana, sns. (Marka 16,20). Ny mpino dia tonga tempoly izay ipetrahan'ny Fanahy Masina (1 Korintiana 3,15: 17) ary mivory na aiza na aiza no itarihan'ny Fanahy Masina azy ireo any amin'ny fivoriana.
Raha ny momba ny andro masina taloha ao amin'ny Testamenta Taloha, toy ny "fialantsasatra, volana vaovao na sabata" dia maneho ny aloky ny ho avy ", ny maha-izy azy dia i Kristy (Kolosiana 2,16: 17). Noho izany, ny foto-kevitra momba ny fotoam-pivavahana manokana dia esorina amin'ny fahafenoan'i Kristy.
Misy ny fahalalahana amin'ny safidin'ny fotoam-pivavahana araka ny toe-javatra iainan'ny tsirairay, ny fiaraha-monina ary ny kolontsaina. "Misy mihevitra fa ny andro iray dia avo noho ny iray hafa; ny iray kosa, dia mitovy foana isan'andro. Samy manana ny heviny ny tsirairay » (Romana 14,5). Ao amin'ny Testamenta Vaovao, misy fivoriana amin'ny fotoana samy hafa. Ny firaisan'ny fiangonana dia naseho teo amin'ny fiainan'ny mpino an'i Jesosy tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, fa tsy tamin'ny alàlan'ny fomban-drazana sy ny kalandrie liturgical.
Mikasika ny olombelona dia ny Isiraely ihany no misolo tena ny olo-masin'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta Taloha. Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny olona rehetra amin'ny toerana rehetra dia asaina ho anisan'ireo vahoakan'Andriamanitra ara-panahy sy masina (1 Petera 2,9: 10).
Mianarantsika avy amin'ny Testamenta Vaovao fa tsy misy toerana masina kokoa noho ny hafa, tsy misy fotoana masina kokoa noho ny hafa ary tsy misy olona masina kokoa noho ny hafa rehetra. Mianatra isika fa "Andriamanitra izay tsy mijery ilay olona" (Asan’ny Apostoly 10,34: 35) tsy mijery fotoana sy toerana ihany koa.
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fampiharana ny fanangonana dia mazoto amin'ny laoniny (Hebreo 10,25).
Betsaka no voasoratra ao amin'ireo taratasin'ny apostoly momba ny zava-mitranga ao amin'ny fiangonana. "Aleo tonga hivoarana izany rehetra izany!" (1 Korintiana 14,26) hoy i Paul, ary fanampiny: «Fa aoka ny olona rehetra hanao ny marina sy milamina» (1 Korintiana 14,40).
Ny fiasa lehibe amin'ny fotoam-pivavahana dia ny fitoriana ny teny (Asan’ny Apostoly 20,7; 2 Timoty 4,2), fiderana sy fisaorana (Kolosiana 3,16:2; 5,18 Tesalonianina), fanelanelanana ho an'ny filazantsara sy ho an'ny tsirairay (Kolosiana 4,2-4; Jakoba 5,16), mizara hafatra momba ny asan'ny filazantsara (Asa. 14,27) ary fanomezana ho an'ireo sahirana ao am-piangonana (1 Korintiana 16,1: 2-4,15; Filipiana 17).
Ireo hetsika manokana amin'ny fotoam-pivavahana dia nahitana ny fahatsiarovana ny soron'i Kristy. Talohan'ny nahafatesany, dia nanomboka ny Sakafon'ny Tompo i Jesosy tamin'ny fanovana tanteraka ny andalana ao amin'ny Testamenta Taloha. Raha tokony hampiasa ny hevitra mazava momba ny zanak'ondry iray izy hilazana ny vatany izay tapaka ho antsika, dia nofidiny ny mofo izay nopotehintsika.
Izy koa dia nampiditra ny mariky ny divay, izay ilazana ny ra nalatsaka ho antsika, izay tsy ampahany amin'ny pasaritual. Nosoloiny ny pasipaoro ny Testamenta Taloha mba ho fitsaohana amin'ny Fanekem-pihavanana Vaovao. Isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro divay isika, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piveriny (Matio 26,26: 28-1; 11,26 ​​Korintiana).
Ny resaka fiankohofana dia tsy amin'ny teny fotsiny sy amin'ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra. Mikasika ny toe-tsaintsika amin'ny hafa koa izany. Noho izany, ny fanatrehana serivisy iray tsy misy fanahin'ny fampihavanana dia tsy mety (Matio 5,23: 24).
Ny fanompoana dia ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary ara-panahy. Voakasik'izany ny fiainantsika manontolo. Isika dia manolotra ny tenantsika "ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra", izany no ivavahantsika (Romana 12,1).
Ny fiankohofana dia fanambarana ny fahamendrehana sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, izay nambara tamin'ny alàlan'ny fiainan'ny mpino sy amin'ny fandraisana anjara amin'ny vondron'olona mpino.